Superwing Factory Taxanaha - Shiinaha Superwing Taxanaha-saareyaasha, shirkado cusub
Hel qiima bilaash ah
12 ft HVLS Saqafka Fan PMSM Taageerayaasha Ganacsiga For Publ ...
Warshadda Fan qaboojinta
Taageerayaasha Dabaqa Mobilada ee Dibadda
24 FT Taageerayaasha Saqafka Warshadaha ee Garaashka
18 FT Taageerayaasha Saqafka Casriga ah Sri Lanka
Adeegsiga HVLS si loo ilaaliyo dhismayaasha: looga hortago koritaanka caaryada, caariyaadka iyo bakteeriyada la xiriirta huurka badan, taas oo meesha ka saareysa welwelka caafimaadka iyo amniga iyo dayactirka aan loo baahnayn.
Macaamiilku waa King,Marka asaga ama ayada had iyo jeer ilaali qabow & cusub by OPT HVLS FANS.
16Ft Taageerayaasha Saqafka Casriga ah Singapore
Naqshadeynta qaabka qaab-dhismeedka qaabka hawada ee OPT Fan waxay soo saartaa tiir ballaaran oo silsilad ah oo hawadeedhoos ugu qulqulaya sagxadda iyo dibedda dhinac kasta, abuurista diyaarad dabaq ah oo jiifka ahsi isdaba joog ah ugu baahisa hawada meelaha waaweyn. Diyaaraddan "dabaqa jiifka ah" waxay hawo sii riixaysaa si ka weyn masaafada ka hor inta aan si toos ah dib loogu soo celin xagga garka.
6.1M Taageerayaasha Qaboojinta Hawada ee Xawaaraha Yar
Xaalado badan oo cimilo ah, maamulayaasha xarumaha saadka ayaa ku tiirsan qiiqa iyo furan daaqadaha si loo ilaaliyo xasiloonida hawada. Si kastaba ha noqotee, qoyaanku wuxuu qaadan karaa qaabab badan. HVAC way tijaabin kartaa in la beddelo hawada ama hawo la galiyo. Taageerayaasha HVLS waxay ku shaqeeyaan yareynta ogaanshaha heerkulka iyadoo sii kordhinaysa uumi-baxa.
Mid ka mid ah macaamiisheenna dhinaca saadka ayaa ka helay HVLS-keena weyn ee taageereyaasheena in ka badan saddex senti halkii cubic feet ayaa ka waxtar badan nidaamkooda HVAC ee keliya. ”
HVLS Qaboojinta Saqafka Taageerayaasha waaweyn
HVLS saqafka qaboojiyaha taageerayaasha waaweyn ee OPT HVLS tikniyoolajiyadda tikniyoolajiyadda waxay ka dhigaysaa aqoon isweydaarsiyada mid raaxo leh, waxayna hoos u dhigtaa isticmaalka tamarta. Adoo hagaajinaya qulqulka hawada, taageerayaasheena waxay jaangooyaan heerkulka gudaha illaa heer heer kuleylka iyo qaboojinta ay hoos u dhacaan. Xarumaha aan lahayn nidaamka HVAC, Superwing taxanaha PMSM ……
Taageerayaasha Hugh waaweyn ee HVLS
Sidee taageerayaasha HVLS ay wax uga qaban karaan dhibaatooyinka kuleylka iyo hawo qaadista
Si wax looga qabto arrimaha noocaas ah ee la xiriira taageerayaasha HVLS, goobta isboortiga ama milkiilaha xarunta wuxuu ubaahan yahay inuu hubiyo heerkulka uu abuuray marawaxadu.
Waa qaboojinta iyo kuleylka temsuugada mid sax ah la siiyay? Markii ay ogaadeen in tani aysan ahayn, waa hagaag hadda waa waqtigii iyaga si ay uga codsadaan caawimaad xirfad leh dadka ku qalabaysan qalabka xirfadaha iyo aqoonta ku saabsan sida loo sameeyo rakibaadda saxda ah ee taageerayaasha HVLS.
5.5M HVLS Ballaca Ballaaran ee Taageerayaasha Saqafka
Helitaanka xal qaboojiye hufan oo kharash-ku-ool ah ayaa muhiim u ah badankood
bakhaare maareeyayaasha. Awoodda taageerayaasha HVLS inay qaboojiso oo ay isticmaasho kumanaan guul maalinti waa oo cadeyneysa xalka ugu fiican maareeyayaasha xarumaha iyo bakhaarada aduunka oo dhan.
7.3M Taageerayaasha Jimicsiga Jimicsiga
Taageere weyn oo dhex-dhexaad ah 24-cagood ah HVLS ayaa si tartiib ah u dhaqaajinaya tiro badan oo hawo ah illaa 22,000 cagaha laba jibbaaran wuxuuna beddelaa 15 ilaa 30 taageereyaal dabaqa ah. Isku darka hawada, taageerayaasha HVLS sidoo kale waxay caawiyaan hawo-qaadashadaNidaamyada kala-goynta ayaa si hufan u shaqeynaya, iyaga oo u oggolaanaya inay ku shaqeeyaan meel cayiman shan heer sare ah.
20Ft PMSM Taageerayaasha Saqafka Weyn
Isticmaalka HVLS halkii laga isticmaali lahaa taageerayaasha caadiga ah: buuqa oo yaraada, isticmaalka tamarta oo yaraada, qashinka oo yaraada. 1 unug 20 'HVLS ayaa beddeli kara lix heer oo 3' taageereyaal ah oo ku shaqeeya xawaare sare, iyadoo la siinayo boqolkiiba 90 hoos u dhaca isticmaalka korontada.
24Ft Taageerayaasha Jimicsiga Cool
Samee jimicsi si aad ugu raaxeysatid oo aad u caafimaad qabtid, ma ahan oo keliya inaad miisaankaaga dhinto. Nolosha maanta qof walba oo bini aadam ah wuxuu doonayaa inuu ahaado taam ah oo caafimaad qaba. Si aad uhesho oo aad ufiicnaato, hadafkan guud qofwalba wuxuu sameeyaa dhaqdhaqaaq jireed oo adagJirdhiska. Qof walba wuu dhididayaa wuxuuna dareemayaa qoyaan inta jimicsi sameynayo. OPT HVLS waxay ku wareegtaa xaddi badan hawo nadiif ah, oo jidhka bini'aadamka ka dhigaysa mid qoyan oo nadiif ah.
24 FT HVLS Ganacsi Baaxad Weyn Ganacsi Saqafka PMSM Motor Fan
HVLS warshadaha ganacsiga taageere saqafka weyn Hordhac- HVLS ganacsade taageere saqafka weyn Mid ka mid ah welwelka ugu weyn ee maamulayaasha xarunta ganacsiga weyn ama xarunta waa tamarta tamarta. Kordhinta kharashyada tamarta waxay ka dhigi kartaa kuleylka iyo qaboojinta meel ballaaran mid aad qaali u ah. Hadda, waxaad leedahay ……
Soo Gal Taabo